ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အရှင်းသားဖေါ်ပြလိုက်ပြီး သူမပရိတ်သတ်တွေကို စွဲဆောင်ညှို့ယူလိုက်တဲ့ မေပန်းချီရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အရှင်းသားဖေါ်ပြလိုက်ပြီး သူမပရိတ်သတ်တွေကို စွဲဆောင်ညှို့ယူလိုက်တဲ့ မေပန်းချီရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ယခု အခါမှာ တော့ မေပန်းချီ ရဲ့ အလန်း စား ရိုက် ထား တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်လေး ကို တင် ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အမိုက် စား ဗီဒီယို လေး ကို တင် ပေး ရင်း ၁၀ဖိုးပိန်သွား လို့ ပြီးရင်ပြန် ဖျတ်မှာ😅 ဆိုတဲ့ Caption လေး နဲ့ တင်ပေး လာတာပဲဖြစ် ပါ တယ် ။ မေပန်းချီ ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ် တွေ အတွက် ဖြေ ထား တာပဲဖြစ် ပါ တယ် ။ မေပန်းချီ ရဲ့ ဖြေကြား ထားတဲ့းဗွီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ပေး လိုက် ပါတယ်နော် ။
မေပန်းချီ ကတော့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ မျက်နှာ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ကြောင့် အမျိုး သား ထုကြီ းရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးခြင်း ကို ရရှိ ထားတဲ့အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ် ပိုင် အရည်အချင်း အပြည့်နဲ့ အနုပညာ လောကမှာ နေရာ တစ်ခု ရလာသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်း မှာ ဆိုရင် လည်း အပြစ် ပြောစရာ မရှိအောင် ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင် အောင် အကောင်း ဆုံး သရုပ် ဆောင် ပုံဖော် နိုင်သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် နော် … .
အရမ်း မိုက်တဲ့ ကောက် ကြောင်း အလှတွေ ကို ပေါ်လွင် စေတဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဖက်ရှင် မျိုးလေးတွေကို များသော အားဖြင့် ဝတ်တတ် တာ ကြောင့် ပုရိသ တွေ ရဲ့ အာရုံစိုက် အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားခဲ့ ပါ တယ် နော် … .
ယခု အခါမွာ ေတာ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ့ အလန္း စား ရိုက္ ထား တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင္ေလး ကို တင္ ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အမိုက္ စား ဗီဒီယို ေလး ကို တင္ ေပး ရင္း ၁၀ဖိုးပိန္သြား လို႔ ၿပီးရင္ျပန္ ဖ်တ္မွာ ဆိုတဲ့ Caption ေလး နဲ႔ တင္ေပး လာတာပဲျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ေမပန္းခ်ီ ကို ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ေၿဖ ထား တာပဲျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ေမပန္းခ်ီ ရဲ့ ေျဖၾကား ထားတဲ့းဗြီဒီယိုေလးကို ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ ျပန္လည္မၽွေဝ ေပး လိုက္ ပါတယ္ေနာ္ ။
ေမပန္းခ်ီ ကေတာ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ မ်က္ႏွာ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ေၾကာင့္ အမ်ိဳး သား ထုႀကီ းရဲ့ ဝန္းရံ အားေပးျခင္း ကို ရရွိ ထားတဲ့အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပါ။ ကိုယ္ ပိုင္ အရည္အခ်င္း အျပည့္နဲ႔ အႏုပညာ ေလာကမွာ ေနရာ တစ္ခု ရလာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္း မွာ ဆိုရင္ လည္း အျပစ္ ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ေဆးစက္က်ရာ အ႐ုပ္ထင္ ေအာင္ အေကာင္း ဆုံး သ႐ုပ္ ေဆာင္ ပုံေဖာ္ နိုင္သူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ … .
အရမ္း မိုက္တဲ့ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွေတြ ကို ေပၚလြင္ ေစတဲ့ ဆက္ဆီ က်က် ဖက္ရွင္ မ်ိဳးေလးေတြကို မ်ားေသာ အားျဖင့္ ဝတ္တတ္ တာ ေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြ ရဲ့ အာ႐ုံစိုက္ အားေပးမႈေတြကို ရရွိထားခဲ့ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ပရိတ်သတ်တွေ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားစေမယ့် ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ အသဲယားစရာ ဆက်ဆီဗီဒီယို
Next post Live လွှင့်ရင်း ဖင်လှန်ပြလိုက်လို့ အမေရဲ့အဆူကို အတော်လေးခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ မိုးအောင်ရင်